Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Saturday, December 27, 2008
မသိစိတ်က ဟိုး.တိမ်တွေထဲ.. မြူးထူးပျော်ပါး....
မသာယာတဲ့ တေးသီချင်းတွေသာ ဆိုညည်းနေတော့တယ်...
..မကြားချင်တော့ရင်တော့..နင့်နားတွေ ပိတ်ထားလိုက်ပါ ...
တွဲထားတဲ့... လက်တစ်စုံကို မဖြုတ်ချပစ်ခဲ့ပါနဲ့...။
Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Saturday, December 13, 2008
သေချာတာတော့ခေါင်ခေါင်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူး
ပုံပြင်ဆိုတာ တစ်ကယ်မဟုတ်မှန်း မဝေခွဲနိုင်အောင် ခင်ဗျားက ခပ်ညံ့ညံ့ပဲ..
သေချာတာတော့ ခင်ဗျား ခေါင်ခေါင့် ကဗျာတွေလာဖတ်လို့မဟုတ်ဘူး
အဲဒိအချစ်က ခင်ဗျားရေးတဲ့ ကဗျာတွေလောက်တောင် ဖတ်လို့မကောင်းဘူး..
(ဒီလိုပြောရင် ခင်ဗျားက အကြီးအကျယ် ငြင်းဦးမယ် )
သေချာတာတော့ ခေါင်ခေါင်နဲ့ ရန်ခဏခဏ ဖြစ်ရလို့မဟုတ်ဘူး
အစွဲအလန်းကြီးလွန်းတော့ ခင်ဗျားမြင်မကောင်းအောင် လူးလှိမ့်နေတာပေါ့....
မတော်တဆ ခင်ဗျားဟာ ခင်ဗျားပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်
အချစ်ဆိုတာကို မယုံကြည်ပဲ ခင်ဗျားနေနိုင်တယ်
အသဲကွဲတဲ့အခါ အစားတွေမစားပဲ အရက်သောက်ပစ်နိုင်တယ်
အဖေနဲ့အဆင်မပြေရင် ၃ ရက်လောက်မအိပ်ပဲ နေနိုင်တယ်
ခင်ဗျားချစ်သူ အကြောင်းမစဉ်းစားပဲ ကဗျာတွေလှိမ့်ရေးနိုင်တယ်..။
စိတ်အစာမကျေရင် ခေါင်ခေါင်နဲ့ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ရန်ဖြစ်နိုင်တယ်။
Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Monday, December 08, 2008
မင်းရောက်လာတော့မယ် ....10th ဒီဇင်ဘာ...
မရိုးနိုင်တဲ့ အိမ်မက်တွေနဲ့ နင်အစွမ်းကုန် ဖြားယောင်းဦးမယ်
ငါ့ရင်တွေကွဲကြေအောင် မျှော့်လင့်ချက်တွေ ပေးဦးမယ်
ခါတော်မှီကဗျာတစ်ပုဒ် ဖြစ်နေခဲ့တာ...။ ။
Published by ခေါင်ခေါင် under on Saturday, December 06, 2008
ကိုလင်း ဒီပ ကတက်ဂ် တာပါ။ အကြိုက်ဆုံး ကဗျာလေး တဲ့..။ ကျွန်မကလဲ စာတွေကဗျာတွေ ဖတ်တာ.. ငယ်ငယ်တည်းက အရမ်းဝါသနာ ပါတော့ ကြိုက်မိတဲ့ ကဗျာတွေ စာတွေက လည်းအများကြီးပါပဲ။ လေးလုံးစပ် ကဗျာတွေက စလို့ပိုစ့်မော်ဒန်အထိ ဘဘမင်းသုဝဏ် ကစလို့ စိုင်းဝင်းမြင့် အထိ ကျွန်မလက်လှမ်းမီသမျှ ဖတ်ပါတယ်။
အကြိုက်ဆုံးကဗျာ ဆိုတော့ ကျွန်မ ဒီကဗျာလေးကိုပဲ ရေးဖို့သတိရတယ်..။ စိတ်ဓါတ်ကျလွယ်တဲ့ ကျွန်မ ဒီကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး ခဏခဏ အားတင်းရတယ်။ ကျွန်မရဲ့လက်ရှိဘ၀ နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်တယ်...။
( ရှင်မဟာရဌသာရ )
ဒီကဗျာလေးကလဲ ကျွန်မ နှလုံးသားထဲမှာ စွဲနေတာ...။
ကဗျာ ၂ ပုဒ်စလုံး အဓိပ္ပာယ်အပြည့် ရှိသလို နားလည်လွယ်အောင် ရိုးရှင်းပါတယ်..။
အားမာန် အပြည့်လဲ ရှိတယ်နော်...။
ဘလော့ပေါ်မှာ ဆိုရင်လဲ.. ကျွန်မဖတ်မိသမျှထဲမှာ.. ကိုလင်းဒီပ.. ရဲ့ကဗျာ ချိုအေးအေးတွေ ... ကျွန်မကြိုက်တယ် ( ငါ့ပန်းအိုးမှာ ထိုးခွင့်မရတဲ့ နှင်းဆီ) ကို တော်တော်ကြိုက်တယ်။ ကိုအိုင်လွယ်ပန် နဲ့ ကိုတင့်ထူးရွှေတို့ ရဲ့ ကဗျာတွေကိုလဲ ကြိုက်တယ်..။ ကိုဒီပ ပြောသလို ကဗျာဆိုတာ တီးလုံးထည့်မထားတဲ့ သီချင်းတွေပါပဲ..။ ကျွန်မတို့ နှလုံးသားနဲ့ လွပ်လပ်စွာ ဆိုညည်းနိုင်တယ်..။ ကျွန်မအတွက်လဲ ကဗျာဆိုတာ.. အချစ်ဦးပါပဲ.. ။ အချစ်ဦးကို ဘယ်သူက မေ့လို့ရမှာလဲ...နော်။ ။
( ဒီပိုစ့်လေး အတွက် ကျွန်မကို တစ်ကူးတစ်က တက်ဂ် တဲ့ကိုဒီပ ကိုကျေးဇူးအထူးပါ။ တစ်လက်စတည်း.. အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ကျွန်မ စီဘုံးကို ဖြုတ်ထားလိုက်တဲ့အကြောင်း အသိပေးချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဖြုတ်လိုက် ပြန်တပ်လိုက်နဲ့ အားလုံးလဲ ကျွန်မကို တော်တော်မျက်စိနောက်နေပြီထင်ပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့ မောင်နှမတွေထဲက ကျွန်မကို တစ်ခုခု ပြောခဲ့ချင်တာ အသိပေးချင်တာ ဆဲချင်တာများရှိရင် ကွန်မန့်မှာ စိတ်ကြိုက်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်..။ ကျွန်မ မသိသော.. ကျွန်မကိုထိခိုက်ပြီး မလိုလားအပ်သော ကွန်မန့်များကိုတော့ ကျွန်မ ဖျက်ပစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ စီဗုံး အတွက်... သူငယ်ချင်း ငါးလေး နှင့် ပိစိ တို့အား ကျေးဇူးကမ္ဘာ.. )
Published by ခေါင်ခေါင် under မွေးနေ့ဆုတောင်း on Thursday, December 04, 2008
(ကိုဂျဲ အတွက်...... မွေးနေ့လက်ဆောင် Hamster တစ်ကောင်.... )
တစ်ခါတစ်ရံမှာ.. ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ဆိုတာ...
ငါယုံကြည်တာကတော့ အနူးညံ့ဆုံး နှလုံးသွေးစက်တွေက
သူ့ရင်ထဲက အမှန်တရားတွေရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲနေလိမ့်မယ်။
ငါတို့အားလုံးအတွက်တော့ သူဟာ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပဲ..
ငါတို့ရဲ့အမှားတွေကို နားလည်စွာ ခွင့်လွှတ်တယ်...။
ငါတို့ရဲ့ ဆိုးနွဲ့မှုတွေကို.. အပြုံးနဲ့မသိဟန်ဆောင်တယ်...။
ငါတို့ရဲ့ နာကျင်မှု တွေကို နွေးထွေးစွာ မျှဝေခံစားတယ်...။
ငါတို့ရဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ဖြေဖြောက်နှစ်သိမ့်ပေးတယ်...။
ချောမွေ့အနှောက်အယှက် ကင်းသော ဘ၀လမ်းကို
ဒါဟာ..ကဗျာမဆန်တဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း တစ်ခုဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်...။
တစ်ခါတစ်ရံ..ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်နေ့ဆိုတာ...
Published by ခေါင်ခေါင် under Tag on Wednesday, December 03, 2008
အန်တီမမ၀ါ ကကျွန်မကို ကြွားခိုင်းတယ်။ အကြွားပိုစ့်ရေးခိုင်းတယ်။ တက်ဂ် တစ်ကာ့တက်ဂ် ထဲမှာ ကျွန်မအတွက် ရေးဖို့အခက်ခဲဆုံး တက်ဂ်ပါပဲ။ ဟုတ်တယ်လေ.. ကျွန်မမှာ ဘာမှကြွားစရာလဲမရှိဘူး။ မမ၀ါကတော့ ဖိနပ်တွေ အကြောင်းရေးတယ်။ အရမ်းလှတာပဲ ဖိနပ်တွေ..။ များလွန်းလို့ ဖိနပ်ဆိုင်တောင် ဖွင့်လို့ရလောက်တယ်..။ ကျွန်မကတော့. ဖိနပ်ဆိုလဲ ဝေါ့ကင်းရှုး တစ်ရံ ၊ အလုပ်သွားရင် စီးတဲ့ဖိနပ်တစ်ရံနဲ့ အကြမ်းစီးတဲ့ တစ်ရံသာပိုင်ဆိုင်တယ်။ ဝေါ့ကင်းရှုးကလွဲပြီးလဲ ကျန်တဲ့ဖိနပ်တွေ ကျွန်မမကြိုက်သလို စီးလဲမစီးဖြစ်ဘူး။ အ၀တ်အစားဆိုလဲ တီရှပ် နဲ့ ဂျင်းသာ ကြုံသလိုစွပ်ပြီးသွားတဲ့သူ..။ အ၀တ်အစားလဲ ကြွားလောက်စရာ များများစားစားမရှိ ..။ မိတ်ကပ်လဲ တစ်ခါမှ မလိမ်းဖြစ်သလို အလှပြင်ပစ္စည်းတွေလဲ ကျွန်မမှာ မရှိပါ။ ကျွန်မမှာ ကြွားဖို့တော်တော် ဒုက္ခရောက်တယ်..။ ဒါပေမယ့် မမ၀ါကို ချစ်တော့လည်း ကြံဖန်ပြီး ကြွားလိုက်ပါတယ်။
အရုပ်ကလေး တွေချစ်ဖို့ကောင်းတယ် နော်။ ကျွန်မပိုင်သမျှ အကုန်ပဲ ..။ ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ.. ကျွန်မအရုပ်တွေ မချစ်တတ်ဘူး။ တစ်ကယ်မချစ်တာ..။ ဈေးကြီးလို့လဲ ကျွန်မ မ၀ယ်နိုင်ပါဘူး ...။ ဒါတွေ အကုန် လက်ဆောင်ရထားတဲ့ အရုပ်တွေပါ။ သူများပေးတဲ့ လက်ဆောင် ကိုတန်ဖိုးထားတတ်တော့.. သေသေချာချာ တော့သိမ်းထားပါတယ် ။ ကြွားစရာ ဒီအရုပ်တွေပဲ များများစားစားရှိတယ်။ ကျန်တာတော့ ဘာမှမရှိဘူး..။ မမ၀ါ ကျေနပ်တော့နော်...ကြွားလို့ပြီးပြီ.... မမ၀ါရဲ့ဖိနပ်တွေထဲက တစ်ရံလောက်ပေးလေ... နော်...ဟီး.. :P
Published by ခေါင်ခေါင် under အက်ဆေး on Tuesday, September 30, 2008
တစ်ဝုန်းဝုန်းရိုက်ခတ် ပဲ့တင်ဝေစည်.. (အသံတော့ မမြည်ဘူးပေါ့)။
မစို့မပို့ အလှပြင်ထားတဲ့ အလင်းနှစ်ကောင်းကင် ချင်ခြင်းတပ် အိမ်မက်တွေနဲ့လွမ်း.....။
လွမ်းချင်ဦး.....လွမ်းချင်ဦး......။ ရေရွတ်သံမူးမူး... ။အမှောင်လမ်းကို ရွေးလျှောက်ချင်ခဲ့ရဲ့..။
အခါလည်သားလမင်းလဲ ကြယ်တွေကိုလဲ အဖေါ်အဖြစ် ခေါ်မအိပ်တတ်ခဲ့..။
သူချည်းသက်သက် အထီးကျန်ပြီးနေတဲ့ ည။ သူချထားတဲ့ အမှောင်ထဲမှာပဲ ဘာသာပြန်ပျောက်နေပြန်ရော..။
တစ်ရှပ်ရှပ် သစ်ရွက်ကြွေသံ...။ အဝေးက နာရီသံချောင်းခေါက်သံ... ။ခပ်ဝေးဝေးက ခွေးဟောင်သံ..။
သန်းခေါင်ယံ ရထားက ဥသြ သံရှည်ဆွဲ...။ရောက်ချင်သေးတယ်..။ မျှော်လင့်ချင်သေးတယ်.. ။
အလင်းရှိမဲ့ အာရုဏ်ဟာ ဘူတာစဉ်တစ်ခုလို ရပ်စောင့်နေ...။ မ၀ံ့မရဲ စိတ်ရဲ့ ထောင့်စွန်းခပ်ကျကျ...။
ဝေ့၀ဲမှုန်ရီ..။ မျှော်လင့်ရာလမ်းကလေး .. မရောက်ခင်... မရောက်ခင်....။
ငါတို့ဆီက ကြယ်ရောင်လ၀န်း အလင်းတန်းတွေ သိမ်းနှုတ်မခံနဲ့ဦး..။
မရောက်တတ်သေးတဲ့ ဥယျာဉ်စိမ်းထဲက လေသေတွေ ၀ဲလည်ပြိုဆင်း ကျမလာစေနဲ့ဦး........။
အမှန်တရားကို မျိုချပြီး အငိုက်မိ မခံနဲ့ဦး...။
သဘာဝမကျတဲ့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တွေကို ခေါက်ရိုးချိုးထားလိုက်ဦး...။
တစ်စုံတစ်ရာ မြတ်နိုးချင်းကို သိုဝှက်.. အဲဒိ သိုဝှက်ခြင်းကိုပဲ မြတ်နိုးနေလိုက်ဦး...။
ပြီးရင် ဘယ်ဘက် ရင်အုံအစွန်းမှာ.. အနီရဲရဲ နှင်းဆီတစ်ပွင့်ကို ထိုးစိုက်..။
နောက်ထပ် မေ့ချင်ယောင်ဆောင်လို့မရတဲ့ သတိတရတွေနဲ့ အကျီခပ်ပါးပါးလေး တစ်ထည်ကို အတ္တကြီးကြီးနဲ့ ငါတို့သီချုပ်ကြစို့...(ဒဏ်ရာတစ်ချို့ပါကောင်းပါမယ်...)။ လွမ်းချင်ဦး..... ။ ချင်ခြင်းတပ် အိမ်မက်တွေနဲ့လွမ်း..
မကြာမီ ရွာတော့မည်ဆိုတာတော့သိနေခဲ့တယ်..(အသံတော့ မမြည်ခဲ့.)..။ ဖြေးညင်းရိုက်ခတ်ပဲ့တင်ဝေစည်..။ ပင်လယ်လို ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတဲ့ မိုးတိမ်တွေ...။
Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Sunday, September 28, 2008
နွေနဲ့ ဆောင်းကို .. တစ်ကူးတစ်ကန့်
မိုးရေစက် တွေထဲ အချစ်ကထိုင်ပြီး
ငါက မင်းမရှိပဲ... ....
လူမသိ သူမသိ ဒီ တိမ်အုပ်ထဲ ငိုနေခဲ့တယ်...
ငါ့ရှိုက်သံတောင် မှမကြားစေရပါဘူး .. ကွယ်.
မင်းက ဒီပွဲကို စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင်
မိုးရွာတဲ့ လမ်းအတိုင်းလာ လိုက်ရင်.
ရှိန်းရှိန်းမြမြ.. ရှိရုံလောက်ပဲ ပိုပါတယ်....
Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Friday, September 26, 2008
ဒိထက်လင်းတဲ့ အချစ်သီချင်းမရှိတော့ဘူး ချစ်သူရဲ့
Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Monday, September 22, 2008
မနက် မနက်တွေ ရောက်တိုင်း
နင့်ကိုပဲ အရင်ဆုံးသတိရမိတဲ့ စိတ်တွေနဲ့
နင့်စီးတဲ့ ကျောင်းကားကြီးက ငါ့ရှေ့က ဖြတ်သွားတိုင်း
နင့်အခန်းရှေ့မှာ လာရပ်ပြီး အေးခဲနေမိတဲ့နေ့တွေ
ငါသိပ်ချစ်တဲ့ အကြောင်း ပြောပြလိုက်တယ်..
လူကြားထဲမှာ ခါးလေးထောက်ပြီး နင်ငါ့ကိုရန်တွေ့တယ်
"ငါတက်တဲ့ ကျောင်းက ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်.. နင့်အဆင့်နဲ့တန်လို့လား "တဲ့
ကွန်ပျုတာ တက္ကသိုလ်က ကောင်မလေးရယ်
(သူငယ်ချင်း ကျော်ဇော ရဲ့သီချင်းလေးအား ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည် )
Published by ခေါင်ခေါင် under အက်ဆေး on Saturday, September 20, 2008
အဲဒိလိပ်ပြာရဲ့ ပါးလွှာတဲ့ သွေးကြောတွေထဲ ငါ့လွပ်လပ်မှုတွေ ယူဆောင်သွားခဲ့တယ်
သူ့ခြေအစုံက ၀တ်မှုန်တွေထဲ မှာတော့ ငါ့ရင်ဘတ်ထဲ က ထာဝရအမှန်တရား တစ်ခုထည့်ပေးလိုိက်ပါတယ်
ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ဖြတ်သန်းပြီး ထွက်သွားပါ
မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းရဲ့ တစ်ဖက်ဆီကို ပျံသန်းပြီး ရောက်အောင်သွားပါ
ငါကသာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရင်ကွဲလို့ ကျန်နေခဲ့မယ့်လိပ်ပြာ....
Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Friday, September 19, 2008
Published by ခေါင်ခေါင် under for your heart on Thursday, September 18, 2008
Published by ခေါင်ခေါင် under အက်ဆေး on Wednesday, September 17, 2008
ဆည်းဆာရဲ့ နံရံ ကို
တစ်စ တစ်စ အိုမင်းသွားတယ်
ညနေခင်းဟာ တစ်ဖန်စိုထိုင်းစ ပြုလာပြန်တယ်
ခံစားလွန် အရောင်ရင့် လိပ်ပြာရဲ့
အသိစိတ်တွေ ဖွေးကနဲ ဖွေးကနဲ ပျံလွင့်ကြွေဝဲ
အဝေးအမြင့်ဆီ.. ရုတ်ခနဲ ပျံထွက်ပြေး...
မပြည့်စုံသူများနဲ့ အတ္တလွန်ကဲသူတစ်ချို့ ရဲ့
(စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းသာ သင့်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်) တဲ့
ညနေခင်းကြယ် တစ်ပွင့်တစ်လေများ ကြွေကျလာမလား
တစ်စုံတစ်ခု ကိုမျှော်လင့်မိတာ အသေအချာပဲ...
နာရီ. မိနစ် စက္ကန့်မခြားတစ်ဖြေးဖြေးပြောင်းလဲလျက်
တစ်စ တစ်စ ပူပြင်းလောင်မြိုက်လာသောကြောင့်..
Published by ခေါင်ခေါင် under for your heart on Monday, September 15, 2008
ONE- Give people more than they expect and do it cheerfully.
TWO- Marryaman/woman you love to talk to. As you get older, their convensational skills will be as important as any other.
THREE- Don't believe all your hear,spend all you have or spend all you want.
FOUR- When you say, ' I love you,' mean it.
FIVE- When you say, ' I'm sorry,' look the person in the eye.
SIX-Be engaged at least six months before you get married.
SEVEN- Believe in love at first sight.
EIGHT- Never laugh at anyone's dreams. People who dont' dreams don't have much.
NINE- Love deeply and passionately. You might get hurt but it's the only way to live life completely.
TEN- In disagreements, fight fairly. No name calling.
ELEVEN- Don't judge people by their relatives.
TWELVE- Talk slowly but think quickly.
THIRTEEN- When someone asks youaquestion you don't want to answer, smile and ask, ' Why do you want to know?'.
FOURTEEN-Remember that great love and great achievements involve great risks.
FIFTEEN-Say 'bless you ' when you hear someone sneeze.
SIXTEEN-When you lose, don't lose the lesson.
SEVENTEEN-Remember the three R's :Respect for self; Resepect for others and Responsibility for all your actions.
EIGHTEEN-Don't letalittle dispute injureagreat friendship.
NINETEEN-When you realize you've madeamistake, take immediate steps to correct it.
TWENTY- Smile when picking up the phone. The caller will hear it in your voice.
TWENTY-ONE- Spent some time alone.
Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Saturday, September 13, 2008
မင်းဆီ ငါမသွားနိုင်တဲ့ နွေရက်တွေ
ငါ့ဆီ မင်းမလာနိုင်တဲ့ ဆောင်းညများ
မင်းနှလုံးသားနဲ့ အနီးဆုံး နံပါတ်တွေ ကိုငါနှိပ်တယ်
ငါ့ရင်ခွင်နဲ့ အနီးဆုံး နံပါတ်တွေကို မင်းခေါ်တယ်
Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Friday, September 12, 2008
ခဏလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငါ့အိမ်မက်တွေပြန်ကြည့်စမ်းပါ
မင်းအရိပ်တွေ ကြီးပဲ မြင်ရမယ်
ငါ့ရင်ထဲက အမှန်တရားတွေ မြင်ရမယ်
တစ်ဖွဲဖွဲ ကြွေကျလာတဲ့ သစ်ရွက်တွေ..
လေနှင်ရာ အလွင့်မှာ..စိတ်တွေ လိုက်ပါလွင့်လူးရင်း....
ငါခဏ ခဏ သစ်ရွက်စိတ်ပေါက်သွားတယ်..
ရှင်သန်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ .. ငါ့ဘ၀ပါ..
မင်းကလွဲ ရင် အရာရာ ကိုငါငြင်းတယ်....
မင်းကိုပြန်မြင်ခွင့်ရမဲ့ နေ့ကိုပဲ ငါစောင့်နေတယ်..
Published by ခေါင်ခေါင် under ဟာသ on Wednesday, September 10, 2008
(Laughter is the soul's medicine)
Published by ခေါင်ခေါင် under ဟာသ on Tuesday, September 09, 2008
Even after you pray, if U R still in Darkness - Please PAY the
Published by ခေါင်ခေါင် under အက်ဆေး on Saturday, September 06, 2008
ဒီညတော့ တောင်ကျချောင်းလို ငါရွာချလိုက်ပြီ... ။ အိန်ဂျယ်..ရေ..မင်းဟာ
ရတနာတွေ လျှို့ဝှက်မြုပ်နှံရာ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ့။ တစ်စစီ
ဆုတ်ဖြဲကြေမွနေတဲ့ လမ်းပြမြေပုံက ငါ့လက်ရှိဘ၀ပါ။ ငါ့ဘ၀ကို တစ်ရွာဝင်
တစ်ရွာထွက် ရွက်လွင့် ရှာဖွေနေဆဲ။ သတိရတိုင်း ကောင်းကင်ကိုပဲ
မော့မော့ ကြည့်မိတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကောင်းကင်တစ်ခုတည်း
အောက်မှာ အတူရှိနေခြင်းကပဲ ငါ့အတွက် နောက်ဆုံး အခွင့်အရေး..။
ငါတို့အတူ စီးဆင်းဖူးတဲ့ မြစ်တစ်စင်းကလဲ လူမသိသူမသိ
ဆက်လက်စီးဆင်း နေဆဲ..။ မြေပုံထဲမှာ ရှာလို့ကတော့ မင်းဘယ်လိုမှ
မတွေ့နိုင်ဘူး .. အိန်ဂျယ်.။မြေအောက်မြစ်တစ်စင်း သယ်ဆောင်လာတဲ့
သယံဇာတ တွေကို နှင်းဆီပန်းပွင့်တွေထဲ တိတ်တဆိတ် ငါဝှက်ထားခဲ့တယ်။
လမင်းတစ်စင်း ဆီမှာတိုင်တည်ရင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာတတ်တဲ့
လေးထောင်းသေတ္တာထဲမှာ မီးတောက်လေး တစ်ခုကို ငါ့အသက်နဲ့ လဲပြီး
စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ ငါတို့ရဲ ပွဲတော်ရာသီပြန်ရောက်ရင် မီးကူးပြီး
ပွဲတစ်ခင်းလုံး လင်းစေရမယ်..။ ဒီမီးတောက်လေးကို မင်းအမုန်းနဲ့ ထွန်းညှိခဲ့
တာပါ..။ မင်းအမုန်းနဲ့ ငါ့မှာလင်းလို့လေ...။ ငါတစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့တဲ့
နယ်မြေအဟောင်းထဲမှာတော့ ငါ့မှာ အလွမ်းတွေ ရွှဲရွှဲစိုရင်း....။ မနက်မနက်
ရောက်တိုင်း မင်းရှိတဲ့ အရပ်ဆီဦးညွတ်ရင်း....ဟို.. မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်မှာ ..
ငါ့နှလုံးသား .. နှင်းဆီပွင့်တွေ ...ထိုးစိုက်ပေးခဲ့တယ်...။
မင်းရောက်လာချိန်မှာတော့.. ဒေါသတကြီး ရိုက်နှက်ချွှေချလိုက်တဲ့
နှင်းဆီပွင့်ဖတ်တွေ.... ငါ့ကမ္ဘာမြေအနှံ့ ပြန့်ကျဲလို့ပေါ့...........။ ဒါဟာလည်း
ငါနေ့စဉ်ကပြနေတဲ့ အက်ကြောင်းထပ် ပြဇတ်တစ်ပုဒ်ပါပဲ.....။ ဒီလိုနဲ့ ငါလဲ
မင်းအမုန်းကို ဘိန်းစွဲသလိုစွဲခဲ့ရတယ်...။ နှင်းဆီတွေ မပွင့်ပဲ မနေနိုင်
ကြသလိုပဲ... မင်းအတွက်တော့ ငါဟာ အမုန်းဖွဲ့..တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပဲ..
Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Thursday, July 31, 2008
Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Tuesday, July 29, 2008
ငါချစ်တဲ့ (သူ) ငွေရောင်အလင်းတန်းမှာ
မဟုတ်မှန်း (သူ) သိစေဖို့
(သူ) နဲ့ ....
Published by ခေါင်ခေါင် under ဟာသ on Saturday, July 26, 2008
ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာသည်။ လမ်းကိုဖြတ်ကူးသည်။လမ်းလယ်ခေါင်တွင် 'ချယ်ကိုရီဂျစ်ကားတစ်စီး တံခါးများ ပွင့်လျှက်ရပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ကားအနားတွင် အတိုက်ခံရသော လမ်းဖြတ်ကူးသူ၏ အလောင်းရှိနေသည်။ မနီးမဝေးတွင်ရဲကားနှင့် ရဲတစ်ဦးရပ်နေသည်။ ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိသူက ယောက်ျားကြီးကို လက်ယက်လှမ်းခေါ်လိုက်ပြီး ပြောသည်။
"ကျွန်တော့်နာမည် ဗိုလ်မှူးဒိုကိုနားယက်ပါ။ မိတ်ဆွေရဲ့မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားကိုကြည့်ပါရစေ။"
ယောက်ျားကြီး အိတ်ထဲက မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားကိုထုတ်ပြသည်။
"ဟုတ်ပြီး မစ္စတာအီဗန်နော့၊ စစ်ချက်ယူဖို့ အတွက်မေးတာကိုဖြေပါ။ ရဲကြပ်ပီထရော့ကရေးပါလိမ့်မယ်၊ လမ်းဖြတ်ကူးသူကို ခင်ဗျား ဘာဖြစ်လို့ကားနဲ့တိုက်ရတာလဲ"
"ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှမတိုက်ဘူး၊ ဒါကျွန်တော့်ကား မဟုတ်ဘူး။"
"ပီထရော့ ရေးစမ်း၊ အပြစ်ကိုဝန်မခံ၊ ကားကခိုးလာတဲ့ကားလို့ "
"မဟုတ်တာပဲ ကျွန်တော်ကားမမောင်းတတ်ဘူး၊ ကားလိုင်စင်ဲလဲမရှိဘူး"
" ပီထရော့ဆက်ရေး၊ ကားမမောင်းတတ်ဘဲ၊ ကားမောင်းလိုင်စင်မရှိဘဲ၊ မောင်းလာတယ်လို့ ရေး၊ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားပါးစပ်က အရက်နံ့ရသလိုဘဲ"
"မဖြစ်နိုင်တာ မပြောစမ်းပါနဲ့ဗျာ၊ ကျုပ်ဘီယာပဲသောက်လာတာ"
"ပီထရော့ဆက်ရေး၊ အရက်မူးပြီး ကားမောင်းလာတယ်လို့"
"ဘာလဲ ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက် ခေါင်းမှကောင်းကြရဲ့လား၊ ကျွန်တော့မှာ အလီဘိုင်ရှိတယ်ဗျ၊ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်မယားငယ်ဆီ ရောက်နေတယ်ဗျ"
"ပီထရော့ဆက်ရေး၊လင်ရှိမိန်းမကို မတရားကျင့်ခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံတယ်လို့ ။"
"ဟေ့လူတွေ၊ခင်ဗျားတို့လိုအရူးတွေနဲ့ ကျုပ်ဘာမှစကားဆက်ပြောစရာမရှိဘူး။ ဒါပဲ၊ သွားမယ်။"
ယောက်ျားကြီး လှည့်ထွက်ချိန်မရလိုက်ချေ။ နံပါတ်တုတ်နှင့်အရိုက်ခံလိုက်ရသဖြင့် နေရာတွင်ပင် ခွေခွေလေးလဲကျသွားသည်။
ရဲမှူးက ဌင်းကို လက်ထိတ်ခပ်လိုက်ပြီးရဲကြပ်ကိုပြောသည်။
"ဆုံးအောင်ဆက်ရေးစမ်း ပီထရော့။ အသာတကြည်အဖမ်းမခံပဲ ပြန်လည်ရန်မူသဖြင့် အင်အားသုံးဖမ်းဆီးခဲ့ရသည်လို့။
အေး. . . . ဒါနဲ့ဒီနေ့ ပဲ မင်းရဲချုပ်ကိုသွားပြီး ရုံးအဖွဲ့ဆီမှာ နာမည်ကြီးလူဆိုးတစ်ယောက်ကို ဖမ်းမိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်စာရင်း သွင်းလိုက်၊ ကြားလား၊ အခု ရာဇ၀တ်မှုကြီးတွေကို တစ်ခုမှ ရဲကမဖေါ်ထုတ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောရဲတဲ့ အကောင်ပြောကြည့်စမ်းပစေ၊ ဟင်း"
Published by ခေါင်ခေါင် under အောင်ဆန်းပေးတဲ့ မြန်မာပြည် on Monday, July 21, 2008
Published by ခေါင်ခေါင် under POEM on Monday, July 21, 2008
as naltural as the healing
happier,more sensitive and aware..
Relationships_of all kinds _are like sand held in your hand.Held loosely , with an open hand, the sand remains where it is.The minute you close your hand and squeeze tightly to hold on,the sand trickles through your fingers. You may hold on to some of it, but most will be spilled.A relationship is like that.Held loosely,with respect and freedom for the other, it is likely to remain intact. But hold too tightly,too possessively and the relationship slips away and is lost.
Afterawhile you learn the subtle differeence between
company doesn't mean security
instand of waiting for someone to bring you flowers.
And you learn that you really can endure,,,,,,,,,,
that you really are strong,,,,,,
and you really do have worth,,,,,
And you learn and you learn,,,,,,,,,
with every good-bye you learn,,,,,,,
Published by ခေါင်ခေါင် under ကဗျာ on Sunday, July 20, 2008
ငါမှာ ချစ်ခြင်းပြတိုက် တစ်ခုရှိတယ်
မင်းမှာ ရင်တွင်းနန်းတော်တစ်ခု ရှိဖို့လိုတယ်
နေဆယ်စင်းကို ကောင်းကင်မှာ ချိတ်ဆွဲထားပါစေ
စမ်းရေအေးလဲ တစ်ထောင်းထောင်း ထပွက်နေပါစေ
ခြောက်သွေ့ရှုံ့တွနေတဲ့ နေလောင် တစ်သီးတစ်ချို့နဲ့
ပေါင်မုန့်ခြောက် အနည်းငယ်ပဲ ရှိပါစေ
ပါးလျတဲ့ လေထုကြောင့် ၀င်သက်ထွက်သက်
မင်းနဲ့ အတူတူဆိုတဲ့ အနာဂတ်ကို အရင်းတည်ပြီး
မွန်မြတ်သန့်ရှင်းတဲ့ အချစ်ရဲ့ တိုက်စားခြင်းကို ခံချင်တယ်
(သံသရာရဲ့ အဆုံးမရှိ မျဉ်းကွေးပေါ်မှာ
Published by ခေါင်ခေါင် under အက်ဆေး on Sunday, July 20, 2008
သူငယ်ချင်း ဒီပါ ပေးထားတာလေးကို မျှဝေခံစားတာပါ ...
ိငိုလို့မရတော့တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ
မင်းအတွက်တော့ အမြဲတမ်း နိုးထနေခဲ့ပါတယ်..
မင်းကိုနှုတ်ဆက်ဖ်ု့ ငါ့လက်တွေ ထုံကျင်နေသလို
ဘာမှမပြောပဲ ခံစားနေရသူချင်း အတူတူ